Fikatsahana fampandrosoana :: Miantso firaisan-kinan’ny Malagasy ny Filoha Rajoelina • AoRaha
Fikatsahana fampandrosoana Miantso firaisan-kinan’ny Malagasy ny Filoha Rajoelina
«Firaisan-kina sy firaisampo». Io no antso avo nataon’ ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, amin’ny vahoaka malagasy hahafahana miroso any amin’ny fampandrosoana haingana ny firenena. «Pejy vaovao indray no misoratra eo amin’ny tantaran’ i Madagasikara. Mila manana fijery lavitra isika. Eto no hiarovana ny voninahi-pirenena , eto no kianja hampiray fo sy hampiray saina ny vahoaka malagasy», hoy izy, nandritra an’ny fitokanana ny kianjan’ny Barea, teny Mahamasina, tamin’ny sabotsy tolakandro teo. Noantitranteriny hatrany io fiandrandrana ny hisian’ny firaisankina sy ny firaisan-tsaina eo amin’ny Malagasy rehetra io, rehefa mitokana fotodrafitrasa toy izao. Antoka iray hahafahana mametraka ny fampandrosoana io, araka ny naverimberiny.
Nambarany, araka izany, fa ilaina izay fientanam-pon’ ny rehetra hifanome tantana hiroso amin’ny fanatanterahana an’ireo velirano nampanantenainy, indrindra taorian’ny raharaha fikasana hifofo ny ainy. Nanentana ny rehetra mba ho saro-piaro amin’ity fotodrafitrasa goavana ity ny Filoha ary niantso ny Malagasy mba hanaja izany. Lasa ho endrika famantarana vaovao ho an’ny firenena ny kianjan’ny Barea eny Mahamasina, izay ho zary lasa ambohipihaonan’ny Malagasy ity. «Tsy ny rova fotsiny intsony no haingon’Antananarivo fa eo ihany koa ity kianja ity», hoy izy. Tsy ho kianja filalaovam-baolina fotsiny fa handray ny matso sy ny fetin’ny Foloalindahy tahaka ny mahazatra ihany koa ny kianjan’ny Barea, etsy Mahamasina.
«Toerana manan-kasina ity kianja ity. Nisehoan’ny mpanjaka tamin’ny vahoaka fahiny, fanaovan’ny Filoham-pirenena fianianana», hoy hatrany ny Filoha, Rajoelina Andry. Manam-pahefana maro no tonga nanatrika an’ity lanonana nitokanana tamin’ny fomba ofisialy ny kianjan’ny Barea ity. Isan’izany ny ben’ny tanànan’Antananarivo, Andriantsitohaina Naina sy ny governoran’Analamanga, Rasoamaromaka Hery izay nipetraka teo anilan’ny Filoha mivady. Teo ihany koa ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta notarihin’ny praiminisitra Ntsay Christian. Nisy ny fanoloran’ny orinasa sinoa tamin’ny fomba ofisialy ny fanalahidin’ny kianja Barea tamin’ny Filoha, talohan’ny kabary nataony.
Maro ihany koa ireo governora sy olom-boafidy nanotrona ny Filoha teny an-toerana. Nambaran’izy ireo fa afaka mirehareha amin’izao zavabitan’ny Fanjakana izao ny Malagasy rehetra fa nahazo fotodrafitrasa manara-penitra holovain’ny taranaka fara mandimby. Hipoka tanteraka ihany koa Mahamasina izay nirenty loko maitso fotsy mena, tamin’ny sabotsy teo. Naneho an’izay firaisan-kina izay sy nisaotra an’ny Filohan’ny Repoblika amin’izao fahavitan’ ny kianja izao ihany koa ireo mpanakanto maro nanafana ny lanonana teny an-toerana.
Fanatsarana ny sosialim-bahoaka “Manan-jo hisitraka fampandrosoana sahaza ny mponina”, hoy Razafindravahy Edgard
Fampitomboana teti-bola :: Miandrandra tohana mafy avy amin’ ny governemanta ireo governora
« Rock sy ny revintsika » :: Voahosotra ho “Miss & Mister” i Haritra sy Malalatiana